Unogona kundiratidza here kuti Google rankings inoratidzirana sei nedhekisi yangu yemashure?
Kuburikidza nemakore gumi apfuura, mugove weshumba wevadzidzisi vemasitemu uye webmasters zvakaburitsa mashoma evanhu vanopesana nemashure ekunyengera - zvose nekuda kwemahofisi akakwirira muGoogle's SERPs. Somugumisiro, makore anenge mashanu apfuura shanduro huru yekutsvaga yakapa Penguin yekutanga yegorgorithm inoshandiswa - kutanga penalizing uye ku-indexing mazita akawanda ePBNs (mabhuku ehupfumi ehupfumi), mashandisi akabatanidza mapurazi, kuendesa mavhiri (kugoverana), pamwe nekusimudza mutsvuku mutsvuku nevakashambadzira mabhoji kuitira kuti vavakidzani vavakidzani. Ndokusaka kunyange kupotsa zvishoma kubva kuGoogle's Main Guidelines pamusoro pekusava nehanya, spammy kana kushandiswa kumashure kunogona kukanda iwe webhusaiti yako kana bhulosi mukutonga chirongo chejeri.
Google Inotaurira Zvakanaka Kushamwaridzana Nevanhu Vakaipa
Chinhu chokutanga chinoratidza kuwirirana kwakasimba pakati peedlinks yako yemashure uye nzvimbo chaiyo yepaGoogle ndeyokuti Nhasi nyika yehutano yakanyongedzwa nemasangano. Mamiriyoni awo akaberekwa nemabhoti eIndaneti. Zvimwe zvakasikwa nokuda kwekutengeswa kwemahombekombe kana kuti zvinotarisirwa kune imwe neimwe inoshandiswa kushandiswa kwekuchinjana. Panguva imwe chete, dzimwe hukama hunogona kunyatsogadziriswa kutarisa sechisikigo sezvinobvira, zvoga zvacho ndezvenhau yekare. Saka, chinetso chikuru cheGoogle ndechekuongorora nhoroondo ye backlink ye webhusaiti yega yega kana bhulogi - kunzwisisa kuti ndiani ari kutamba mutambo wakanaka uye zvechokwadi unofanirwa kuve akakwirira.
Backlinks Database uye Zvechokwadi Zviito
Kutaura zvazviri, apo injini huru dzekutsvaga seGoogle pachayo dzinoona hukama hunoratidza nzira yewebsite yako kana bhurogi, pane zvitatu chete zvingasarudzo zvekudzokera shure. have. Ndinoreva kuti zvinogona kuonekwa sezvakanaka uye zvinofanirwa kufunga nezveGoogle's main search algorithm. Panguva imwecheteyo, zvinhu zvose zvinogona kungoramba zvakangofanana - uye dzimwe hukama hunogona kuonekwa sechinhu chisina maturo uye chisina maturo - pasina zvakakonzerwa nemafungiro eSEO. Mushure mezvose, webhusaiti yako kana bhutiro inogona kutongerwa chirwere, sezvo iwe chikamu chekubatanidza kwako mushure rekuvimba kwako (kana kuti imwe chete yakasanganiswa) inofungidzirwa kuva yekusarura kana yekuita.
Cold Facts About Rankings uye Backlinks Database
Saka, pane ukama humwe pakati pemaonero chaiwo muSERPs uye database yewebsite ye backlinks. Asi ingave yakasimba sei? Heino urongwa hwebhuruti hunoti uratidze kuti chii chinowanikwa kunze kwekwenyika nehosi yako pachikwata.
nzvimbo dzakakwirira muSERPs dzinopindirana nehuwandu hwehutano hwemashoko anenge anenge makumi matatu nehafu;
kuongororwa kwechirongwa ichi kunogona kuratidzika sechinyanya kufadza, sezvo hukama hudiki husingashamisiwo -kufunga kuti Google inogona kuvimba neanenge mazana maviri ekuisa mazita;
kupfuura 99% yemawebsite ose uye mabhuku akaongororwa nezvinoitika nyaya yechirangaridzo yakaonekwa kuva nehana imwe chete iri kunze kwekubatanidza;
inenge 22% yemapepu ega ega akawanikwa akachengetedzwa zvakanaka pasina chekunze kumashure zvachose;
kuva nezvimwe zvibatanidza zvinogona kuwirirana nepamusoro wepamusoro, asi kutengesa pane nhamba yavo pane kunaka hakurevi kuti webhusaiti yako icharatidzwa pamusoro pekutsvaga Source .